Devanagari Newsगाउँमा यूवती बनेर नाटक खेलेका पंकज कसरी बने बलिउडका प्रिय अभिनेता ? — Devanagari News
गाउँमा यूवती बनेर नाटक खेलेका पंकज कसरी बने बलिउडका प्रिय अभिनेता ?
बलिउडमा कसको भाग्य कतिबेला चम्कन्छ र कसको भाग्यले कतिबेला साथ छाड्छ थाहा हुँदैन ।कुनै समय चलचित्रमा भूमिकाका लागि तड्पिने कलाकार पंकज त्रिपाठी आज बलिउडको सर्वाधिक प्रिय र पहिलो रोजाइको कलाकार बनेका छन् । तर, यो स्थानसम्म आइपुग्न उनले गरेको संघर्ष र भोगेको पीडा धेरैका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्छ ।
‘ग्याङ्स अफ वसेपुर, फुकरे, मसान, बरेली कि बर्फी, एक्सट्रेक्सन, स्त्री, लुका छिपी, कागज, मिमी’ लगायतका चलचित्रमा काम गर्दासम्म पंकज पहिलो नम्बरको कलाकार बनिसकेका छन् । उनलाई दर्जनौ चलचित्रबाट अफर आइरहेको छ । तर, कुनै समय उनी कामको खोजीमा मुम्बइका सडकमा भौतारिएका थिए ।
पंकजको जन्म गोपालगञ्ज, बिहारमा भएको हो । उनका पिता बनारस त्रिपाठी खेतमा काम गर्थे । घरमा आर्थिक सहयोग गर्नका लागि पंकजले ११ बर्षको उमेरमा नै खेतमा काम गर्न सुरु गरेका थिए । तिहारको मौका पारेर गाउँमा आयोजना हुने नाटकमा उनी यूवती बनेर अभिनय गर्थे । उनको अभिनयलाई गाउँका मानिसहरुले प्रशंसा गर्थे । उनलाई गाउँका साथीहरुले अभिनयमा करिअर बनाउन सुझाव समेत दिएका थिए ।
१२ कक्षा पास गरेपछि पंकज होटल म्यानेजमेन्टको अध्ययनका लागि पटना पुगे । उनी कलेजमा पनि नाटकमा अभिनय गर्थे भने राजनीतिमा पनि उनको रुची थियो । एक र्यालीमा सहभागी हुँदा उनी एक सातासम्म जेलमा समेत परेका थिए । उनले सात बर्षसम्म पटनाको एक पाँचतारे होटलमा समेत काम गरे ।
सात बर्षसम्म पटनामा बसेपछि उनी मुम्बई पुगे । पंकजलाई सन् २००४ मा एक चियाको विज्ञापनमा नेता बन्ने अवसर मिल्यो । यही बर्ष नै उनलाई अभिषेक बच्चन र भूमिका चावलाको चलचित्र ‘रन’मा समेत काम गर्ने अवसर मिल्यो । यो चलचित्र रिलिज भएपछि पनि पंकजलाई कुनै फाइदा भएन ।
सन् २००४ मा उनले अभिनेत्री मृदुलासँग बिहे गरे । मृदुलालाई उनले एक बिहे समारोहमा देखेका थिए । पंकजले भारतीय मिडियालाई दिएको एक अन्तरवार्तामा सन् २००४ देखि सन् २०१० सम्म आफूले केही पनि कमाउन नसकेको बताएका छन् । मृदुलाले नै घरको सबै खर्चको जिम्मेवारी सम्हालेको पंकज बताउँछन् । अन्धेरीको बाटोमा हिड्दै पंकजले अभिनयका लागि धेरै बलिउडकर्मीसँग आग्रह समेत गरेका थिए ।
६ बर्षसम्म काम नपाएर निराश बनेका पंकजलाई अनुराग कश्यपको चलचित्र ‘ग्याङ्स अफ वासेपुर’मा अभिनयको मौका मिल्यो । यो चलचित्रमा उनले निर्वाहा गरेका भूमिकालाई दर्शकले रुचाए । यसपछि भने उनी लगातार हिट चलचित्रमा काम गरिरहेका छन् ।
चलचित्रमा अभिनय गर्दा केही टेक खाएपछि उनलाई एक्सन निर्देशकले गाली समेत गर्थे । सो समयमा पंकजलाई ती निर्देशकको टाउको फोडेर गाउँ फर्किने सोच समेत नआएको होइन । पंकजले एक अन्तरवार्तामा भनेका छन्–‘पहिला काम नपाएर हैरान थिएँ । अहिले काम धेरै भएर चलचित्र छाड्नु परेको छ । जब म घर जान्छु, तब मलाई मेरो पार्किङमै एक नयाँ चलचित्रको अफर आउँछ ।’
पंकज केही हप्तादेखि चलचित्र ‘ओ माई गड २’को छायांकन गरिरहेका छन् । यसअघि उनले ‘८३ र बच्चन पाण्डे’को छायांकन सकिसकेका छन् ।
आमाको निधनले सहनै नसक्ने पीडा महशुश गरिरहेको छुः अक्षय कुमार
हिट गीतको रिमेकमा सागरको दाउ, फिमेल भर्सनको भरोसमा पल
ऋचा शर्मालाई पुत्र लाभ
यसरी तयार भएको थियो लासिमीत राईको अन्तिम गीत ‘आकास बद्लिएर’
दिवंगत पिताको सम्झनामा आमेशको ‘बाबा’